Indonezia: Tondra-drano sy Fahatapahan’ny Aterineto any Aceh · Global Voices teny Malagasy
Indonezia: Tondra-drano sy Fahatapahan'ny Aterineto any Aceh
MpanoratraA. Fatih Syuhud
Voadika ny 06 Aogositra 2017 18:22 GMT
(Fanamarihana: tamin'ny desambra 2006 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny anglisy)
Tsy misy zavatra ratsy indrindra ho an'ny bilaogera Indoneziana indrindra manodidina ny fiatombohan'ny taona, afa-tsy ny “fialan'ny” aterineto tampoka vetivety.
Ny antony notaterin'i Budi Putra, Sani Asy'ari ary Enda Nasution dia hoe ” ny horohorontany amorontsirak'i Taiwan ny 26 desambra no nanimba ny hosina any ambany ranomasina sy nanankorotana ny fifandraisandavitra any Azia Atsinanana, Atsimo-Atsinanana ary Atsimo.”
Mahatratra 90 isanjato ny Indoneziana tsy mahazo mihitsy na miadana be ny fifandraisana aterineto. Araka an'i Yulian Firdaus, nanatsonga avy amin'ny vavahadin-tserasera, dia mihevitra fa mety “hahatratra iray volana” ny fanamboarana izany ary mandritra izany fotoana izany dia mety ho any amin'ny ambany indrindra hatramin'izay ny fanaovan-javatra an-tserasera Indoneziana. Mazava loatra fa raha toa ka tena iray volana tokoa, dia ho tafahoatra ho an'ny mpiondana aterineto tahaka an'i Enda Nasution izay manontany tena sao efa farandro.
Ny bilaogera Indonezia sasany izay tsara vintana mbola mahatratra fifandraisana aterineto tahaka an'i Willy Sudiarto Raharjo, dia mbola mitaraina ihany noho ny fahaelan'ny aterineto. Mba tsy hitenenana ny fahavitsian'ny zotra azon'ny blaoginy.
Tondra-drano any Aceh
Roa taona taorian'ny tondra-drano, iray amin'ireo loza voajanahary lehibe indrindra, dia toa tsy maintsy hiatrika loza voajanahary hafa i Aceh. Na dia mbola kely noho ny tsunami aza, dia tsy zakan'ny mponina ao Aceh mihitsy ny fahaverezana sy ny hamafin'ny voina.
70 000 ny olona nafindra toerana, na niala ny trano mba hialoka any amin'ny faritra manodidina. Teo amin'ny 60 ho eo ny olona maty.
Be loatra izany ho an'ny Indoneziana amin'ny ankapobeny sy ho an'ny bilaogera Indoneziana manokana raha “hankalaza” taona vaovao 2007.